I-China Photoluminescent yakhazimula isikhiqizi sethayela nabakhiqizi | I-Grand Luminous
I-Photoluminescent glazed tile
Izakhiwo ze-Photoluminescent glaze tile Super ukukhanyisa izakhiwo zenza amathayili akhange kakhudlwana.Akukhona ubuthi, izinto ezingalimazi, akukho msebenzi womsakazo .Inqubo engaphezulu yomugqa, ukugcina izici zama-tile ajwayelekile, kulula ukuyisebenzisa. Ukukhazimula: I-Yell-eluhlaza okotshani, eluhlaza okwesibhakabhaka, i-Sky-blue.Can yenziwe ngokwezifiso zamakhasimende.Zikhona izinhlobo ezine ezikhanya tile omnyama okhanyayo ethandwayo: 1. Tile elilodwa le-ceramic tile 2. Ubuso obukhanyayo obubodwa bokuphrinta kokukhululeka .. .
I-Photoluminescent glaze tile
Izici zokukhanya okuphezulu zenza ama-tiles ahehe.Akukho ubuthi, azikho izinto ezilimazayo, akukho msebenzi we-radio .Inqubo engenhla yomphezulu, igcina izici zama-tile ajwayelekile, kulula ukuyisebenzisa.
Ukukhazimula: Okuluhlaza okotshani, okuluhlaza okotshani, okuluhlaza okwesibhakabhaka.Can kwenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Kunezinhlobo ezine zokukhanya kukhilimu omnyama okhanyayo odumile:
1. I-tile eyodwa ekhazimulayo yobumba
2. Indawo eyodwa yokukhanya enesithombe sokuphrinta sokukhululeka
3. Ingxube yokukhanya imibala Tile Ceramic
4. Phuma uphawu lodonga noma phansi olufakiwe
I-Ceramic tile ekhanyayo ingumkhiqizo okhanyayo ongasetshenziswa njengezimpawu zokuphepha kanye nemihlobiso yesakhiwo. Ukusetshenziswa kwendawo ehlukile kungaba odongeni, phansi, izitebhisi kanye nomsebenzi wobuciko egalari. Iningi le-ceramic yethu ekhanyayo nayo ilungele ukwakha okwayihlanganisa inqubo yendabuko yokusebenza nobuchwepheshe besimanje.
Babonisa umphumela wokukhanya okungapheli, i-antiseptic, okuhlala isikhathi eside, nokuqina kwamakhemikhali. Ngemuva kokumunca ukukhanya okuthile okubonakalayo njengokukhanya kwelanga okuqondile imizuzu eyi-10 ukuya kwe-20, bese ukhazimula ngokuzenzakalela amahora angama-8 ~ 12hours. Imikhiqizo ayisiyo njongo yomhlobiso kuphela kepha icubungula nokuphepha.
Izici kanye nokusebenza kwama-Photo Luminescent Ceramics Tiles:
1. Ama-tile we-luminescent ceramics we-luminescent akhiqizwa ngokungeza isithombe se-luminescent pigment inqubo yokukhiqiza yobumba obujwayelekile kanye nengilazi. Uma kuqhathaniswa nobumba kanye nengilazi ejwayelekile, imikhiqizo ingakhanya ebumnyameni ngemuva kokungenisa amalambu abonakalayo, okwenza izembozo zangasese nezingilazi zisebenzise kabanzi .
2.Okuqukethwe kwesithombe se-luminescent ceramics kungathatha amalambu ahlukahlukene abonakalayo kuze kube kugcwele, bese kukhanya ebumnyameni njalo, ukusetshenziswa okungenamkhawulo kokusebenzisa isikhathi eside ngemuva kokukhanya, izibani eziphakeme, eziphindwe izikhathi eziyishumi ngokukhazimula kwendabuko yendabuko. Izinto ezibonakalayo azinawo umsakazo, zingenangozi futhi azinabungozi.
3. Izibani eziphuthumayo eziphansi eziphansi kakhulu zingaqondisa abantu ukuba baphume ngokuhlelekile ngaphansi kwesimo esiphuthumayo futhi banciphise ukudideka ngaphandle kokonga amandla.
4. Ukusetshenziswa kwezithombe zokukhanya ezithambile ezindlini ezifuywayo kanye nasezakhiweni zomphakathi ngeke kuhlobise futhi kube ubuhle izindlu nendawo yokusebenza, kodwa futhi kungaletha izinto eziningi ezakhamizi ngokukhanya kwazo ebumnyameni.
5. Izithombe ze-luminescent ceramics zingakhipha i-wave light light ethile, enganqanda izinhlobo ezithile zezikhutha nezifo.Lolu hlobo lwesimilo luhlangabezana nombono ophilayo wemfashini futhi onempilo kubantu banamuhla ngokusetshenziswa kwemikhiqizo ekhishini nasendlini yokugezela.
6. Ama-cylics wesithombe se-luminescent awubonakaliso obonakalayo, ukumelana nokuqothuka, ukungagugi komlilo, ukumelana nokuguga futhi awunawo amandla omsakazo uma uqhathaniswa nezinye izinto ze-luminescent, ezenza ukuthi zisetshenziswe kabanzi ezindlini ezifuywayo nasezakhiweni zomphakathi.
Esedlule: I-Luminescent Pebble Moses Tile
Olandelayo: I-Photoluminescent Gravel
I-Luminescent Glaze Pebble Tile
Imifino engilazi ekhanyayo
I-Photoluminescent Glaze Mosaics
I-Holistic Luminescence Pebble Mosaics
I-Luminescent Pebble Moses Tile